Kandida Orlando Robimanana : Naratra fa vonona hatrany -
AccueilSongandinaKandida Orlando Robimanana : Naratra fa vonona hatrany
Kandida Orlando Robimanana : Naratra fa vonona hatrany
09/10/2018 admintriatra Songandina 0
Omaly no tonga teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato ny Kandida Robimanana Orlando taorian’ny lozam-pifamoivoizana nahazo azy tany amin’ny distrikan’i Sambava ny Alahady lasa teo. Na dia teo aza ny ratra nahazo azy, dia nilaza ity Kandida ity fa vao maika nanome hery azy hiatrika ny adidy lehibe miandry azy izany.
Raha tsiahivina dia isan ‘ny naratra mafy tamin’ity lozam-pifamoivoizana niseho teo amin’ny toerana antsoina hoe Andranojoby Fokontany Antsaborara Kaominina Farahalana, I Orlando Robimanana, izay fantatra fa kandida ho filoham-pirenena vokatry ny fahatapahan’ny hisatra ny fiara lehibe iray teo an-toerana. Olona roa avy hatrany no fantatra fa naratra mafy noho ny nafitsoky ity mpamily tsy manara-dalana ity ka tao anatin’izay ihany koa ny mpiambina azy, nanara-dia. Ankoatra ny faharatrana mpandeha, nahitana fahasimbana ihany koa ity fiara tra-doza ity. Raha ny fanazavana voaray, avy nanatanteraka fihaonana tamina mpandraharaha lavanila momba ny antom-pilatsahany ho kandida filoham-pirenena no anton-diany tany an-toerana izao tra-doza izao. Tsy nahatsiaro tena mihitsy izy noho fahavoazany ka nentina notsaboina tao amin’ny hopitaly Besopaka Sambava taorian’izay.
Araka ny fanazavan’ny mpitandro filaminana nisahana ny raharaha sy ireo nanatri- maso ity loza ity, nandeha mafy ilay fiara noho izy efa tapaka hisatra, no sady mbola tsy nisy jiro ihany koa. Somary nalalaka ny arabe ka izay no nitarika ny fifandonana mafy. Tsy tana araka izany ny familiana hoy ny mpamily ka dia nivilivily kanjo nifatratra tany amin’ity fiara tsy mataho-dalana ka nandatra ny olona tao anatiny. Nipitika avy etsy ankavanana ilay fiara iray ity, ka nilatsaka tao anaty lavaka indray rehefa nifanehitra teo amin’ny fiholanana. Tonga teny an-toerana ny zandary nanao ny famotorana sy ny fizahana. Efa eo am-pelatananan’ny zandary ny fanadihadiana momba ny raharaha. Ankoatra izay, efa nahazo ny fitsaboina sahaza azy ity kandida ity, izay fantatra fa hitodi-toha eto Antananarivo hanatanteraka ny fampielezan-kevitra.
Tsy maty voalavo an-kibo ny solombavambahoaka lany tao Androy amin’ny anaran’ny Mapar, izay zatra nikirakira sy naka ny volam-bahoaka, fony izy kestera tao amin’ny antenimieram-pirenena tsiahivina ilay raharaha nahaverezana vola 4 lavitrisa Ariary. Ankehitriny dia ...Tohiny